LGBT တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူမရဲ့အမြင်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတင်မိလို့ ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည် – Cele Snap
LGBT တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူမရဲ့အမြင်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတင်မိလို့ ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
October 27, 2021 By Ju Ry Celebrity
အကယ်ဒမီ မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုန်ေ ရွရည်ကတော့ အနုပညာလောကထဲကို ၂၀၀၅မှာကြော်ငြာရေပန်းစားနဲ့မော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်၂၀၁၃မှာတော့သူမဟာရုပ်ရှင်တွေစတင်ရိုက်ကူးပါတော့တယ်၊၂၀၁၈မှာတော့သူမဟာ အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီးသရုပ်ဆောင်ဆုကြီးကိုထိုက်ထိုက် တန်တန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမကတော့ အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ လျှောက်လှမ်းနေရင်းနဲ့ပဲ အပျိုကြီးပဲလုပ်တော့မလိုလို ချစ်သူပဲရှိနေပြီလိုလိုနဲ့ သတင်းတွေ သိုးသိုးသန့်သန့်တော့ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့ အနေအထိုင်သိုသိပ်လွန်းတဲ့ သူမကိုတော့ ပရိသတ်တွေကအချစ်ပိုနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..
သူမက လက်ရှိမှာ တူလေးဖြစ်သူနဲ့ အတူပျော်ရွင်စွာဆော့ နေရင်းနဲပဲ အချိန်ဖြုန်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ သူမက ဖေ့ဘုတ်မှာပုံတွေကိုတင်လေ့မရှိဘဲ Instagram မှာတင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်နော်… ဒီနေ့လေးမှာတော့ ဝတ်မှုန်ရွေရည် က သူမရဲ့အင်တာဗျုးအဟောင်းလေးကို တင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..သူမရဲ့ လိင်တူ ချစ်သူတွေအပေါ်မှာ မြင်နေတဲ့ အမြင်လေးကိုပဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး ဖြေပေးသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.
သူမ တင်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုအောက်မှာတော့ ကစ်လေးအပေါ်မှာ ဝေဖန်နေ သူတစ်ချို့တွေရှိပေမဲ့ တစ်ချို့ကလည်း အားပေးစကားတွေ ပြောထားကြပြီး သူတို့ရဲ့ လိင်တူ ချစ်သူတွေကတော့ ကျေးဇူးတင်စကားတွေ ရေးသားထားကြပါတယ်နော်… ပရိသတ်ကြီးလည်း ကစ်လေးရဲ့ လိင်တူချစ်သူတွေအပေါ် မြင်တဲ့အမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီး ပရိသတ်ကြီးရဲ့ အမြင်လေးကိုလည်း ရေးပေးသွားကြပါအုံးနော်…
Source: Wut Hmone Shwe Yee
အကယျဒမီ မငျးသမီးခြောလေး ဝတျမှုနျေ ရှရညျကတော့ အနုပညာလောကထဲကို ၂၀၀၅မှာကွျောငွာရပေနျးစားနဲ့မျောဒယျတဈယောကျဖွဈလာပါတော့တယျ၂၀၁၃မှာတော့သူမဟာရုပျရှငျတှစေတငျရိုကျကူးပါတော့တယျ၊၂၀၁၈မှာတော့သူမဟာ အကောငျးဆုံး အမြိုးသမီးသရုပျဆောငျဆုကွီးကိုထိုကျထိုကျ တနျတနျရရှိခဲ့ပါတယျ။ သူမကတော့ အနုပညာလမျးကွောငျးပျေါမှာ လြှောကျလှမျးနရေငျးနဲ့ပဲ အပြိုကွီးပဲလုပျတော့မလိုလို ခဈြသူပဲရှိနပွေီလိုလိုနဲ့ သတငျးတှေ သိုးသိုးသနျ့သနျ့တော့ ထှကျပျေါခဲ့ပမေဲ့ အနအေထိုငျသိုသိပျလှနျးတဲ့ သူမကိုတော့ ပရိသတျတှကေအခဈြပိုနဆေဲ ဖွဈပါတယျနျော..
သူမက လကျရှိမှာ တူလေးဖွဈသူနဲ့ အတူပြျောရှငျစှာဆော့ နရေငျးနဲပဲ အခြိနျဖွုနျးနတော ဖွဈပါတယျနျော.. တဈခါတဈရံမှာတော့ သူမက ဖဘေု့တျမှာပုံတှကေိုတငျလမေ့ရှိဘဲ Instagram မှာတငျပေးလရှေိ့ပါတယျနျော… ဒီနလေ့ေးမှာတော့ ဝတျမှုနျရှရေညျ က သူမရဲ့အငျတာဗြုးအဟောငျးလေးကို တငျလာခဲ့တာ ဖွဈပါတယျနျော..သူမရဲ့ လိငျတူ ခဈြသူတှအေပျေါမှာ မွငျနတေဲ့ အမွငျလေးကိုပဲ ရိုးရိုးရှငျးရှငျးလေး ဖွပေေးသှားတာ ဖွဈပါတယျနျော.
သူမ တငျထားတဲ့ ဗီဒီယိုအောကျမှာတော့ ကဈလေးအပျေါမှာ ဝဖေနျနေ သူတဈခြို့တှရှေိပမေဲ့ တဈခြို့ကလညျး အားပေးစကားတှေ ပွောထားကွပွီး သူတို့ရဲ့ လိငျတူ ခဈြသူတှကေတော့ ကြေးဇူးတငျစကားတှေ ရေးသားထားကွပါတယျနျော… ပရိသတျကွီးလညျး ကဈလေးရဲ့ လိငျတူခဈြသူတှအေပျေါ မွငျတဲ့အမွငျလေးကိုနားထောငျပွီး ပရိသတျကွီးရဲ့ အမွငျလေးကိုလညျး ရေးပေးသှားကွပါအုံးနျော…
ခင်ပွန်းဖြစ်သူမရှိတော့တဲ့နောက်မှာ သူမကိုစိတ်ခွန်အားတွေပေးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေရှိတဲ့အတွက် ကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေရတဲ့ နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း
သားငယ်လေးမမွေးခင် ကိုယ်ဝန်လေးနဲ့အမိုက်စားပို့စ်တွေပေးပြီး အရမ်းကိုလန်းနေတဲ့ နှိုင်းယှဉ်မြင့်မိုရ်ရဲ့ပုံရိပ်များ